Amagqabi eBay, enzelwe ntoni kwaye asetyenziswa njani? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Imifuno esiyaziyo njengamagqabi e-bay inokuvela kwimithi eyahlukeneyo. Omnye wemithombo eyaziwa kakhulu yi-laurel (Laurus nobilis).
Uhlobo ngalunye lwamagqabi e-bay ane-flavour eyahlukileyo. Amagqabi eBay angasetyenziswa amatsha, omisiwe, umhlaba, okanye uphelele. Kukho izibonelelo ezahlukeneyo zempilo kunye nokusetyenziswa kwale mifuno, okwenza ukuba kuthandwe ekuphekeni.
1 Bay ishiya izibonelelo
2 Ulwazi lwezempilo
Bay ishiya izibonelelo
Ixesha lonyaka lidumile kulo lonke elaseLatin America ngokunika umnxeba wokugqibela kulungiso lweembotyi. Kodwa amagqabi e bay ayongeza incasa kwisuphu, isityu, nezinye izitya ezinencasa. Isibonelelo esiphambili kukuba banokuphucula incasa yokutya kwakho ngaphandle kokongeza isodiyam.
Ziye zasetyenziswa nangabanye ukunyanga umhlaza, igesi, inkwethu, kunye nentlungu edibeneyo okanye amathumba. Nangona kunjalo, abukho ubungqina benzululwazi obaneleyo bokuxhasa ukusetyenziswa kwegqabi le-bay kwezi zibonelelo.
Igqabi le-Bay liyaziwa ngokuququzelela ukwetyiswa kwamafutha. Kwaye kuyanceda ukususa amanqatha amaninzi egazini. Kuhlalutyo olupapashwe kwiphephancwadi leKlinikhi yaseKlinikhi yeSondlo, abathathi-nxaxheba abafake i-1 ukuya kwi-3 yeegramu ze-blonde yonke imihla kangangenyanga babonisa ukwehla kwamanqanaba e-cholesterol embi kunye ne-triglycerides.
Igqabi elinye elisetyenziselwa ukupheka mhlawumbi alitshintshi ixabiso lesondlo lesitya esilungisiweyo. Igqabi lihlala lisuswa kwipleyiti ngaphambi kokutya. Nokuba ishiywe kwisuphu, isityu, okanye esinye isitya, ayiniki micronutrients ebalulekileyo okanye ii-macronutrients.
Ukuba imifuno iyacolwa kwaye ityiwe epleyitini, unokufumana izibonelelo zesondlo. Isipuni setafile enye sibonelela malunga neekhalori ezintlanu, uninzi lwazo lukwimo yeecarbohydrate. Ii-micronutrients kumagqabi e-bay zibandakanya ivithamini A, ivithamin C, ivithamini B6, imanganizi, isinyithi kunye necalcium.